Legends of Seville, hatrany am-piandohan'ny arabeny mankany Pedro el Cruel | Vaovao momba ny dia
Legends of Seville
Luis Martinez | 22/04/2021 13:02 | kolontsaina, Sevilla
Seville dia toerana mety indrindra ho an'ireo tia kolontsaina, ankoatry ny tsy misy farany drafitra azonao atao ao an-tanàna, ny tantaran'izy ireo sy ny angano dia maro an'isa satria tsara tarehy sy manaitra. Mariho fa ny niandohany dia niverina farafaharatsiny tany amin'ny tanànan'ny Romanina an'ny Hispalis Natsangan'i Julius Caesar tamin'ny taonjato XNUMX tal.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ny tanàna Andalusianina dia nankafy tanjaka lehibe tamin'ny vanim-potoana medieval, rehefa naverin'ny aristocrats Castilian taorian'ny nahazoana azy ireo indray Ferdinand III the Saint tamin'ny 1248. Ary mbola bebe kokoa aza amin'ny andron'ny Habsburgs, rehefa nanjary seranana ara-barotra voalohany niaraka tamin'ny Tontolo Vaovao sy ivon-toekarena ao amin'ny empira espaniola. Ny tantara manankarena toy izany dia voatery namorona tantara angano maro. Noho izany, raha te hahalala ny angano an'i Seville, holazainay aminao ny sasany amin'ireo tena mahaliana.
1 Ny tantaran'ilay Susona tsara tarehy
2 Doña María Coronel sy ireo menaka mangotraka
3 Ny lohan'ny mpanjaka Pedro I, olo-malaza ao amin'ny angano Seville
4 Ilay lehilahy vato
5 Ny tantaran'ny Puppy, mahazatra eo amin'ireo angano ao Seville
6 Ny angano an'i Calle Sierpes
Ny tantaran'ilay Susona tsara tarehy
Ny lasa mahery setra tao an-tanàna dia hita ao amin'ity tantara ity izay ao anatin'ny angano an'i Seville. Niverina tamin'ny Moyen Age, dia nisy ny fanafihana tao amin'ny faritr'i Seville jiosy ary, ho setrin'izany, ny jiosy dia niray tsikombakomba tamin'ny Moors mba hifehezana ny tanàna.
Mba handaminana ny drafitra dia nivory tao amin'ny tranon'ny banky izy ireo Diego Susón, izay zanany vavy nalaza noho ny hatsaran-tarehiny nanerana ilay faritra. Nantsoina izy io Susana Ben Susón ary niditra tamina fifandraisana miafina tamina tovolahy kristianina tanora iray izy.
Hatramin'ny nahatonga ny tsikombakomba tao an-tranony, dia fantany avy hatrany izay ho vokatr'izany. Ny drafitra dia ny famonoana ireo aristocrats lehibe ao an-tanàna. Ary izy natahotra ny ain'ny olon-tiany, dia lasa nilaza taminy ny zava-misy. Tsy tsapany fa, amin'ny fanaovana izany, dia mampidi-doza ny ankohonany sy ny jiosy Sevillian rehetra.
Tsy nitaky fotoana ela ilay rangahy hampitandrina ny tompon'andraikitra amin'ny tsikombakomba, izay nandidy ny hisamborana ireo mpitarika ny teti-dratsy, anisan'izany ny rain'i Susona. Nanantona andro vitsivitsy tao izy ireo Tablada, toerana namonoana ireo olon-dratsy ratsy indrindra tao an-tanàna.
Nisolo tena tamin'ny taila iray tao amin'ny valan-javaboahary María Luisa any Seville i Susona
Ny tovovavy dia nolavin'ny fireneny, izay nihevitra azy ho mpamadika, ary koa ilay lehilahy nanaovany firaisana. Ary, avy eto, ny angano dia manolotra kinova roa. Raha ny filazan'ny voalohany dia nangataka fanampiana tamin'ny archpriest an'ny katedraly izy, Reginaldo ao Toledo, izay nanafaka azy ary niditra an-tsehatra ka naka fisotroan-dronono tany amin'ny trano fitokanana. Etsy ankilany, ny faharoa milaza fa manan-janaka roa miaraka amin'ny eveka izy ary, rehefa nolaviny izy, dia lasa tia mpandraharaha Sevillian.
Na izany aza, mitambatra indray ny angano amin'ny fiafarany. Rehefa maty i Susona dia nosokafana ny didim-pananany. Nilaza izy fa maniry izany notapahina ny lohany ary napetraka teo am-baravaran'ny tranony ho vavolom-pahoriana momba ny fahoriany. Mbola afaka mahita ianao anio, raha mandalo ny lalan'ny fahafatesana, taila misy karandohany izay mety ho tranon'i Susona. Raha ny marina, io zotra io dia fantatra amin'ny anaran'ilay zazavavy ihany koa.
Doña María Coronel sy ireo menaka mangotraka
Ity angano avy any Seville ity dia manana akony amin'ny savony, indrindra ny fitiavana sy ny faniriana hamaly faty. Ho fanampin'izany, mitondra antsika any amin'ny fotoanan'ny fahitan'ny tanàna indray. Ramatoa Maria Coronel Izy dia tovovavy Castilian avy amin'i Andriamatoa Alfonso Fernández Coronel, izay mpanohana an'i Alfonso XI an'ny Castile. Nanambady koa izy don Juan de la Cerda, izay indray nanafika ny mpiaro ny zanany lahy, Henry II, rehefa nifanatrika tamin'ny rahalahikeliny izy Pedro I ho an'ny fifandimbiasan'ny seza fiandrianana.
Noho io antony io dia namono an'i don Juan de la Cerda ity farany ary naka ny fananany rehetra ary namela ny mpitondratena ho potika. Pedro tsy fantatro manokana, fa rehefa nahita azy dia tia azy. Na izany aza, Doña María Coronel dia tsy vonona ny hifandray tamin'ilay olona nanafatra ny famonoana ny vadiny ary niditra tao amin'ny trano fitokanana Sevillian an'ny Santa Clara.
Na dia izany aza dia tsy azony i Pedro I, izay antsoina koa hoe "ny habibiana," mba hamela ny fikasany hanao azy ho vaditsindranony. Mandra-pahatongan'ny indray andro, leo ny stalker mpitondra azy, dia niditra tao an-dakozia fitokanana izy diloilo nandrahoina no nararaka manerana ny tarehy hanaratsiana azy. Tamin'izany fomba izany no nahaizany namela an'i Pedro I hamela azy irery.
Convent an'i Santa Inés
Mbola afaka nanatri-maso ny fahafatesan'ny mpanjaka teo an-tanan'ny rahalahiny rahalahin'i Enrique II izy, izay namerina ny fananana nogiazana tamin'ireo rahavavy Coronel noho izy ireo tsy nivadika tamin'ny tanjon'izy ireo. Noho izany, ireo vehivavy roa ireo dia afaka nahita ny trano fivahinianana Santa Inés tao amin'ny lapan'ny rainy. Ny abba voalohany dia i Doña María Coronel, maty tamin'ny 1411 tany ho any.
Ny lohan'ny mpanjaka Pedro I, olo-malaza ao amin'ny angano Seville
Ny mpanjaka Castilian lozabe koa dia kintana maro hafa amin'ny Seville. Ohatra, ilay hotantarainay aminao. Nandritra ny iray tamin'ireo rambony tamin'ny alina namakivaky ny tanàna dia nihaona tamin'i Pedro i Manisa ny zanakalahin'i Niebla, fianakaviana nanohana Henry II, araka ny nolazainay taminao ny zana-badiny. Tsy ela akory dia nivoaka ny sabatra ary novonoin'ny Loza ilay iray hafa.
Na izany aza, nifoha ilay duel vehivavy antitra fa nijerijery jiro izy ary, gaga rehefa nahalala ilay mpamono olona, ​​niverina nikatona tao an-tranony, nefa tsy nandatsaka ilay jiro nentiny tamin'ny tany. Nampanantena izany tamin'ny fianakavian'ilay niharam-boina i Pedro, mpihatsaravelatsihy Tapaho ny lohan'ny meloka ny fahafatesany ary aharihary ampahibemaso.
Fantany fa efa hitan'ilay vehivavy antitra izy, dia niantso azy hanatrika azy izy hanontany azy hoe iza ilay olon-dratsy. Nametraka fitaratra teo anoloan'ny mpanjaka ilay vehivavy ary nilaza hoe "ao aminao ilay mpamono olona." Avy eo, nasain'i Don Pedro notapahina ny lohany iray amin'ireo sarivongana vita amin'ny marbra fa nanome voninahitra azy izy ireo ary napetraka tao anaty akany hazo. Nanafatra ihany koa izy ny hametrahana ilay boaty amin'ny arabe mitovy amin'ilay nitrangan'ny herisetra, fa tsy hosokafana mandra-pahafatiny.
Na dia androany aza dia azonao atao ny mahita io bust io eny amin'ny arabe antsoina hoe, marina, Lehiben'ny mpanjaka Don Pedro. Ary, raha tsiahivina ity zava-misy malaza ity, dia ny mifanohitra amin'izay, izay itoeran'ilay vavolombelona no nantsoina Lalana Candil.
Ny lohan'ny mpanjaka Don Pedro
Ilay lehilahy vato
Manohy amin'ny Moyen Age izahay hiresaka momba an'io angano hafa an'i Seville io. Milaza izany fa, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia nisy trano fivarotana ao amin'ny Làlana tsara tarehy, an'ny manodidina ny San Lorenzo, izay nijanona ny olona isan-karazany.
Araka izany, fanaon'izy ireo ny, toy ny Sakramenta masina, nandohalika ny olona. Rehefa nahare azy nanatona azy ny vondrona namana iray tao amin'ny fisotroana dia nivoaka izy ireo ary nandohalika rehefa nandalo ny filaharana. Iray ihany fa iray. Ny antso Mateo «el Rubio» te-ho tonga protagonista izy ary, miampanga ireo namany ho voatahy, dia nilaza mafy fa tsy mandohalika.
Amin'izao fotoana izao, a taratra masina nianjera tamin'ilay Mateo tsy nampoizina nanova ny vatany ho vato. Na dia androany aza dia azonao atao ny mahita fatin-dehilahy amin'ny akanjon'ny lamaody mandeha eny amin'ny araben'i Buen Rostro, izay nantsoina nanomboka tamin'izay, Lehilahy vato.
Ny tantaran'ny Puppy, mahazatra eo amin'ireo angano ao Seville
Raha efa nitsidika ny tanàna Andalusia ianao dia ho fantatrao tsara ny maha-zava-dehibe izany ho an'ny mponina ao aminy Alika kely Triana, anarana niarahan'izy ireo nanao batemy ny Kristy an'ny Famaranana. Isaky ny herinandro masina ny fianakavian'ny mpirahalahy dia mitondra azy am-pilaharana avy amin'ny basilica voahodidin'ny rivo-piainana manaitra.
Tsy mahagaga antsika, noho izany, fa eo amin'ireo angano ao Seville dia misy maro izay manana an'io isa io ho ilay mpilalao fototra. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ilay holazainay aminao eto ambany.
Milaza izany fa zazalahy iray gypsy dia milaza mazava tsara alika Nandalo ny tetezana Barcas isan'andro isan'andro avy any Triana aho, avy eo ambanin'ny tanàna, hatrany Seville. Ny iray tamin'ireo olona nahita azy nanao io fitsidihana io dia nanomboka niahiahy an'izany handeha hamangy ny vadiny izy. Izany hoe nifandray tamina nofo izy.
The Christ of Expiration, fantatra amin'ny anarana hoe "the Puppy"
Indray andro dia niandry azy teo akaikin'ny varotra Vela izy ary nanindrona azy impito. Betsaka ny olona tonga tamin'ny kiakiakan'ilay zazalahy ary tsy afa-nanoatra ny fanafihana. Anisan'izany ilay mpanao sary sokitra Francisco Ruiz Gijón, iza amin'ny farany no mety ho mpanoratra ny tarehin'ny Kristy ny Famaranana.
Voalaza fa taitra izy noho ny fanaintainan'ilay tovolahy, ary aingam-panahy avy amin'ny tavany hanao sary sokitra an'ilay an'i Kristy malaza. Etsy an-danin'izany, tsy hitsidika ny vadin'ilay mpamono olona izy, fa rahavavy iray tsy fantatry ny olona akory, ka takonafina ny fivorian'izy ireo.
Ny angano an'i Calle Sierpes
Ity arabe afovoany ity dia iray amin'ireo malaza indrindra any Seville, saingy tsy ny mponina rehetra ao an-tanàna no mahalala ny anton'ny anarany, izay koa noho ny angano Seville. Nilaza izy ireo fa, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tamin'ilay nantsoina tamin'izany Lalana Espalderos Nanomboka nanjavona tsy nisy antony ny ankizy.
Tsy nahenoina azy ireo intsony izy ireo ary niteraka tahotra teo amin'ireo mponina ao amin'io faritra io. Ny biraon'ny Seville, Alfonso de Cárdenas, tsy fantatra izay hatao. Mandra-pahatongan'ny gadra iray nanolo-kevitra ny hamaha ny zava-miafina ho takalon'ny fahalalahany.
izany no Melchor de Quintana ary nigadra izy satria nandray anjara tamin'ny fikomiana hanohitra ny mpanjaka. Nanaiky ilay mpitantana ary avy eo dia notarihin'ilay lehilahy voaheloka ho any amin'ny toerana nisy azy bibilava goavambe sahabo ho roa-polo metatra ny halavany. Nisy sabatra niraikitra tao aminy ary maty io. I Melchior tenany mihitsy no nifanatrika taminy ary namono azy.
Navoaka tao Calle Espalderos ilay menarana na bibilava mba hanomezana toky ny mponina ao aminy. Voalaza fa tonga nizaha izany tamin'ny manodidina rehetra ny tanàna izy ireo ary, nanomboka tamin'izay, nantsoina ny arabe an'ny Sierpes.
Ho famaranana, nasehonay anao ireo angano malaza indrindra an'i Seville. Misy maro hafa toa ny Kristy an'ny Hery Lehibe, an'ny Santa Libraryada na ny an'ny Saints Justa sy Rufina. Saingy avela mandritra ny fotoana hafa ireo tantara ireo. Raha ao an-tanàna ianao dia ankafizo izany. Mandao anao izahay amin'ity rohy ity dia lisitra iray misy fitsangantsanganana azonao atao avy any Seville raha manam-potoana hijerena ny manodidina ianao dia tsy hanenenanao izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Sevilla » Legends of Seville
Sarimihetsika 9 hijerena alohan'ny handehanany any Roma
Fanandramana Covid takian'ny firenena